Xinhua Myanmar - နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကလေး ၃၇၀,၀၀၀ ကျော် မွေးဖွားမည်ဟု ယူနီဆက်ဆို
နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကလေး ၃၇၀,၀၀၀ ကျော် မွေးဖွားမည်ဟု ယူနီဆက်ဆို
ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ Karlovac မြို့ရှိ Karlovac အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံတွင် Nikolina Novacic Mrgan (ယာ) နှင့် ၎င်း၏ မွေးကင်းစကလေးကို စောင့်ရှောက်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-Kristina Stedul Fabac/Pixsell via Xinhua) International Organizations
ကုလသမဂ္ဂ၊ ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန် - ခေါန်ရိန်
နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း၌ ခန့်မှန်းခြေ ကလေးငယ် ၃၇၁,၅၀၄ ဦး မွေးဖွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) က ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
သက္ကရာဇ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်သို့ ကူးပြောင်းပြီဖြစ်သည့်အတွက် UNICEF အနေဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်တွင် ကမ္ဘာမြေသို့ရောက်ရှိလာမည့် ကလေးငယ်လေးများအတွက် အထိမ်းအမှတ်ပွဲကျင်းပလျက်ရှိသည်။
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သော ဖီဂျီနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ ပထမဆုံးကလေးငယ်ကို မွေးဖွားမည် ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်မူ ယင်းနေ့၏ နောက်ဆုံးကလေးကို မွေးဖွားလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း မွေးဖွားမည့် အဆိုပါ ကလေးငယ် ထက်ဝက်ကျော်သည် နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံမှ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းရပြီး ၎င်းတို့မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ၅၉,၉၉၅ ဦး၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ၃၅,၆၁၅ ဦး၊ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင် ၂၁,၄၃၉ ဦး၊ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ၁၄,၁၆၁ ဦး၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ၁၂,၃၃၆ ဦး ၊ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတွင် ၁၂,၀၀၆ ဦး ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၁၀,၃၁၂ ဦး၊ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် ၉,၄၅၅ ဦး၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ၉,၂၃၆ ဦးနှင့် ကွန်ဂိုနိုင်ငံတွင် ၈,၆၄၀ ဦးတို့ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် စုစုပေါင်း ကလေးငယ် သန်း ၁၄၀ မွေးဖွားလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ ပျှမ်းမျှ ဘဝသက်တမ်းအနေဖြင့် ၈၄ နှစ်ခန့် ဖြစ်နိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
“ယနေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ ပြီးခဲ့သည့် တစ်နှစ်ကနဲ့ အတော်လေးကွဲပြားခြားနားတဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲရောက်လာကြတာဖြစ်ပြီး နှစ်သစ်ကူးဟာ ဒီအရာကို ပြန်လည်စဥ်းစားကြည့်ဖို့ အခွင့်အလမ်းသစ်တစ်ခုပါပဲ ” ဟု UNICEF အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Henrietta Fore ကပြောခဲ့သည်။
“ယနေ့မွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့အတွက် ဒီကနေ့ ကျွန်မတို့စတင်တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့ ကမ္ဘာကို အမွေဆက်ခံသွားကြမှာပါ။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ကျွန်မတို့ ကလေးတွေအတွက် မျှတပြီး ဘေးကင်း ကျန်းမာတဲ့ ကမ္ဘာလေးတစ်ခု စတင်တည်ဆောက်သွားကြပါစို့ ” ဟုလည်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Over 370,000 children to be born worldwide on New Year's Day: UNICEF
Source: Xinhua| 2021-01-02 06:07:30|Editor: huaxia
UNITED NATIONS, Jan. 1 (Xinhua) -- An estimated 371,504 babies will be born around the world on New Year's Day, the United Nations Children's Fund (UNICEF) said on Friday.
As the calendar turns to 2021, UNICEF is again celebrating the new lives being brought into the world on Jan. 1.
Fiji in the Pacific will welcome 2021's first baby. The United States will welcome its last. Globally, over half of these births are estimated to take place in 10 countries: India (59,995), China (35,615), Nigeria (21,439), Pakistan (14,161), Indonesia (12,336), Ethiopia (12,006), the United States (10,312), Egypt (9,455), Bangladesh (9,236) and the Democratic Republic of the Congo (8,640).
"The children born today enteraworld far different than evenayear ago, andaNew Year bringsanew opportunity to reimagine it," said UNICEF Executive Director Henrietta Fore. "Children born today will inherit the world we begin to build for them today. Let us make 2021 the year we start to buildafairer, safer, healthier world for children." Enditem
A medical worker tends Nikolina Novacic Mrgan (R) and her newborn baby at Karlovac General Hospital in Karlovac, Croatia, Nov. 11, 2020. (Kristina Stedul Fabac/Pixsell via Xinhua)
Previous Article ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူက တရုတ်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးစင်တာ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား
Next Article ကုလသမဂ္ဂ ကလေးများ ရန်ပုံငွေ အဖွဲ့ က ဆရာဆရာမများအား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးသစ် ထိုးနှံပေးရန် တိုက်တွန်း